Ari antidepressants uye nhumbu kusangana kwakachengeteka? - Info Info, Hutano Dzidzo | Chikunguru 2021
Nharaunda Info Info, Hutano Dzidzo Dzidzo Yehutano Checkout Info Info, Nhau Kambani, Hutano Dzidzo Zvipfuwo Dhinda Wellness Hutano Dzidzo, Hutano Zvinodhaka Info Kambani, Nhau Nhau, Wellness Hutano Dzidzo, Nhau Nhau
Kuru >> Info Info, Hutano Dzidzo >> Unogona here kutora mishonga yekudzvinyirira kana uine pamuviri?
Mukadzi anoona kuti ave nemwana anogona kutarisira kunzwa kufara, kutya, kufara, kana kushushikana zvishoma panguva yepamuviri pake. Asi vanaamai vazhinji vanotarisira pamwe havatarisi kunzwa kunetseka. Zvisinei, zvidzidzo zvinoratidza kuti vakadzi vane nhumbu vanotonyanya kutambura kuora mwoyo ipapo kana vasina nhumbu.
Iyo US Inodzivirira Services Task Force (USPSTF) inoti mukadzi mumwe chete pavanomwe achashungurudzika panguva yepamuviri kana mushure mekusununguka,kusununguka kwekusunungukandiwo akajairika kubata pamuviri uye kusununguka kwemashure. Asi zvakanaka here kurapa paunenge uchitarisira? Ari antidepressants uye nhumbu kusangana kwakachengeteka?
RELATED: Zvinodzvinyirira uye kuyamwisa
Ndezvipi zviratidzo zvekuora mwoyo panguva yekuzvitakura?
Kushungurudzika kwemadzimai kunotaridzika zvakanyanya senge kurapwa kwekuora mwoyo, anodaro Crystal Clancy, ane rezinesi rekuroora uye wezvekurapa kwemhuri pa IrisHutano hwepfungwaHwehutano Hwekubereka muMinnesota. Musiyano uripo pakati pekushushikana kwepenatal uye kukiriniki kushushikana ndekwekuti amai vane nhumbu vanowanzo nyara kusanganiswa nekusanzwa manzwiro akanaka panguva yepamuviri, Clancy anotsanangura.
kurovedza muviri neBP yepamusoro kwakachengeteka
Zviratidzo zvekushushikana mukutakura, maererano ne Sangano reAmerican Pregnancy , inosanganisira:
Kunzwa kuramba wakasuruvara
Dambudziko rekutarisa, kunyangwe pazvinhu zvinowanzo fadza iwe
Shanduko mukudya kana kurara
Pfungwa dzekufa kana kuzviuraya
Kana iwe ukacherekedza zviratidzo zvekuora mwoyo paunenge uine pamuviri, danho rekutanga kutsvaga rubatsiro. Usarega kutya kunyorerwamishonga inodzvinyirirakukumisa kubva mukutarisirwa. Kunyange zvakajairika kuva nekuzeza pamusorokushandisa mishongavachiri nepamuviri, vanachiremba vanowanzo taura kuti iyonjodzi dzinogona kuitikayekusatora mishonga yekudzvinyirira inodarika njodzi dzekuvatora.
Kushungurudzika kurapwa panguva yekuzvitakura
Kusiya kuchirapwa, kushushikana kunogona kukonzera njodzi dzakakomba kuhutano kuna amai vane nhumbu nemwana asati aberekwa, kusanganisira kuzvarwa kusati kwasvika uyehuremu hwekuzvarwa huremu, anotsanangura Sal Raichbach, Psy.D, chiremba wezvepfungwa pa Ambrosia Kurapa Center muFlorida.
Zvinodzvinyirira uye kubata pamuviri
Zvinowanzo chengeteka kurapa kushushikana neinosarudza serotonin reuptake inhibitors(SSRIs), zvakaita se Celexa [kitalopram], Prozac [fluoxetine], uye Zoloft [sertraline] panguva yekuzvitakura, Dr. Raichbach anodaro. Paxil (paroxetine) imwe SSRI inowira mukirasi imwechete iyi, asi inosanganisirwa ne njodzi diki yekuremara kwekuzvarwa kwakadai sekuremara kwemoyo. Kushandiswa kwaro kunowanzoodzwa mwoyo panguva yekuzvitakura.
Iyo USPSTF yakaita chidzidzo kupivakadzi vane pamuviriakatora antidipressant sertraline (anSSRIuye zvakajairwa zveZoloft) uye placebo kurapa kwavo kushushikana. Chidzidzo chakawana kuti vakadzi vakatoraSertralineakange adzikira kushushikana kudzokororwa zvichienzaniswa nevakadzi vaitora piritsi re placebo.
Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), senge Cymbalta , Khedezla, uye Effexor zvakachengeteka zvakarevakadzi vane pamuviri. Lexapro (escitalopram) imwe SNRI mukirasi imwe chete iyi. Kutsvakurudza inoratidza kuti pane njodzi yakawandisa yekubuda kweropa mushure mekusununguka apo SNRIs inotorwa panopera mimba.
Wellbutrin (bupropion) ndeimwe mhando yeanodzvinyirira iyo dzimwe nguva inoshandiswa zvakare kubatsira vanhu kurega kuputa. Haisi yekutanga-sarudzo panguva yekuzvitakura, asi inzira yakachengeteka yekukurukura nachiremba wako kana mamwe mishonga yekudzvinyirira isina kukushandira.
Tricyclic antidepressants, senge Pamelor ( nortriptyline ), ndeimwe kirasi yemishonga yekudzvinyirira inoonekwa seyechitatu-mutsara sarudzo panguva yekuzvitakura nekuti inosanganiswa nekutsamwa, kushushikana, kana kubuda kwepashure kwekubereka.
Zvakajairika kuti vakadzi vatye kunwa mishonga yekudzvinyirira panguva yekuzvitakura, asi zvakakosha kuti murwere wega wega akurukure nemubatsiri wavo wezvekurapa kuti ndeupi kurapwa kwakanakira hupenyu hwavo. Kune varwere vari kuda kuzvipira kune imwe nzira yekurapa chirongwa, pane izvo zvisiri-zvemishonga sarudzo. Maererano ne kudzidza kumwe chete , nzira dzisiri-dzemishonga dzekupindira dzinosanganisira (asi hadzingogumira kune):
Nguva dzose psychotherapy kusarudzwa
Kupinda muboka rekutsigira
Kufungisisa maitiro ekurapa (CBT), mumapoka, semunhu, kana kunyangwe mumba
Zvekutarisira vanaamai vanekushungurudzika kwakanyanya, kana vanaamai vasingakwanise kuzvipira kune zvimwe zvirongwa, Clancy anoti, Zvakakosha kutsvaga mumwe munhu ane hunyanzvi hwekudzidzira kuraira [mishonga yekudzvinyirira] yevarwere vane pamuviri uye mushure mekusununguka.
Zvimwe zvinokanganisaofkushandiswa kwekudzvinyirirapanguva yekuzvitakura
Pane zvakawanda zvisiri izvo kunze uko nezve izvo vanaamai zvavanogona kutora vachiri nepamuviri nekuyamwisa. Iyo Kuzvidya Mwoyo uye Kushungurudzika Sangano reAmerica inotaura kuti nepo paine njodzi dzakanangana neanodzvinyirira uye nhumbu, kusanganisira njodzi dzekuremara kwekuzvarwa , njodzi dzakaderera zvakanyanya. Iyo zvingangoita mhedzisiro yekuratidzwa kwepamuviri panguva yechitatu trimester uye inosanganisira:
Kudya zvisina tsarukano
Yakanyanya diki ingangoita njodzi yeatism uye ADHD
Kune vakadzi vanoona kuti vari kutarisira uye vatove pane antidepressant, John Hopkins Mushonga inopa zano kurwisa iyokuregayemishonga yako, uye inokurudzira kuti iwe ubvunze nekukurumidza nemupi wako wezvehutano. Ivo zvakare vanokurudzira kuti kana iwe uinekusagadzikana kwepfungwauye urikufunga kuva nepamuviri, kuti ubvunze chiremba wepfungwa usati wabereka.
Dr. Raichbach vanoti Kunyange hazvo njodzi dzekutora mishonga yekudzvinyirira panguva yekuzvitakura ishoma, vanachiremba vanowanzo gadza yakaderera dosi yemushonga inoshanda kudzikisira zviratidzo. Iyo sarudzo yekusarapwa kuora mwoyouye kuzvidya mwoyo kunokanganisa kukura kwe 'fetus'.
Zviri nani kutaura neakochiremba wekuberekanezve sarudzo dzakanakisa dzekutarisira kwako. Hutano hwepfungwaAmerica inopa zviwanikwa uye rubatsiro kune avo vari kutsvaga aHutano hwepfungwanyanzvi.
Vakadzi vane nhumbu vanopihwa mishonga yekudzvinyirira panguva yekuzvitakura vanokurudzirwa kunyoresa muNational Pregnancy Registry yeAntidepressants (NPRAD) nekufonera 844-405-6185.
Beta blockers inogona kubatsira nekuzvidya mwoyo here?
6 asthma kurwisa kunokonzera uye maitiro ekuzvidzivirira
mushonga upi ungatorwa nemukadzi ane nhumbu kuitira kusvotwa
Ndezvipi zviratidzo zveshuga chirwere cheshuga
pamusoro pekorepa huro uye mushonga wekukosora
unokwanisa here kuwana furuu mushure mekurwara nefuruu
kumisa kukosora kwakaipa husiku
unoda kuona chiremba pasina inishuwarenzi
zvakanakisa pamusoro pekambani yekukosora mushonga unodzvinyirira